News - စက်မှုအလူမီနီယံ profile များကိုအသုံးပြုခြင်း
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုး ရှိ၍၊ ရှည်လျားသောဘက်နှင့်တိုတောင်းသောအခြမ်းသည်အမြှောက်များဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုံ ၄၀၄၀၊ ၄၀၈၀၊ ၄၀၁၂၀၊ ၄၀၄၀ သည်စတုရန်း၊ လေးဘက်စလုံးက ၄၀ မီလီမီတာ၊ ၄၀၈၀ သည်အရှည်လျားသော 80mm ဖြစ်သည်။ အတိုသည် 40mm ဖြစ်ပြီး၊ အရှည်မှာဘေးနှစ်ဖက်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ် 4060 ကဲ့သို့သောအထူးများလည်းရှိပါတယ်။ အရှည်က ၁.၅ ဆပိုတိုပါတယ်။
၂။ Slot width နှစ်ခု၊ ၈ မီလီမီတာနှင့် ၁၀ မီလီမီတာသာရှိသည်။ စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းအတွက်သတ်မှတ်ချက်များရာပေါင်းများစွာရှိသော်လည်းသူတို့၏ slot များသည်အခြေခံအားဖြင့်အရွယ်အစားနှစ်မျိုးသာရှိသည်။ အထူးသဖြင့်သေးငယ်သည်၊ ဥပမာ၊ ၂၀၂၀ အထိုင်သည် ၆ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဤသည်သမားရိုးကျဆက်စပ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများသည်အများအားဖြင့်သော့ခလောက်များနှင့်ခွံမာသောထောင့်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်း၊ ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်ဘုံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်လူမီနီယမ် profiles များကိုဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏တပ်ဆင်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
၃။ အမျိုးသားအဆင့်နှင့်ဥရောပအဆင့်နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဥရောပအဆင့်အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းနှင့်အမျိုးသားအဆင့်အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းတို့အကြားကွာခြားချက်မှာလည်းထူးခြားသည်။ ဥရောပစံသည်ကြီးမားသောအမြင့်နှင့်သေးငယ်သည့်တစ်ခုရှိ trapezoidal groove ဖြစ်သည်။ National standard groove သည် rectangular groove ဖြစ်ပြီးအထက်နှင့်အောက်ကဲ့သို့တူညီသည်။ National standard နှင့် European Standard များတွင်အသုံးပြုသော connectors များသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဥရောပစံစက်မှုလုပ်ငန်းလူမီနီယံပရိုဖိုင်းကိုသာ။ ကောင်း၏ထင်ပါတယ်။ ဥရောပစံတွင်အမျိုးသားအဆင့်စံသတ်မှတ်ချက်များထက်ပိုသောသတ်မှတ်ချက်များရှိသည်။ ဥရောပစံကွန်နက်ရှင်များသို့မဟုတ်အမျိုးသားအဆင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များနှင့်အသုံးပြုနိုင်သောစိတ်ကြိုက်မဟုတ်သောစက်မှုဆိုင်ရာအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းအချို့လည်းရှိသည်။
(၄) စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများ၏နံရံအထူသည်အလွန်ပါးလွှာမည်မဟုတ်ပါ။ ဗိသုကာအလူမီနီယံ profile များကိုမတူဘဲ, စက်မှုလူမီနီယံ profile များကိုအလှဆင်အခန်းကဏ္ play မှသာ, မြို့ရိုးအထူအလွန်ပါးလွှာပါလိမ့်မယ်။ စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပံ့ပိုးမှုအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ပြီးအချို့သောဝန်များသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်နံရံအထူသည်အလွန်ပါးလွှာမနေသင့်ပေ။
စက်မှုအလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းသည်သတ္တုစပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုမှုကျယ်ပြန့်ပြီးလက်ရှိဈေးကွက်တွင် ပို၍ လူကြိုက်များသည်။ ၄ င်း၏အရောင်ကောင်းခြင်း၊ ဓာတုဗေဒနှင့်ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိများကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အခြားသံမဏိပစ္စည်းများကိုတဖြည်းဖြည်းအစားထိုး။ စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။
ကျယ်ပြန့်စွာပြောရမည်ဆိုလျှင်စက်မှုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများသည်တံခါးများနှင့်ပြတင်းပေါက်များ၊ ကုလားကာနံရံအလူမီနီယမ်နှင့်ဗိသုကာအလှဆင်ထားသောလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းများ မှလွဲ၍ အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောရထားလမ်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်ကိုယ်ထည်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သက်ရှိသတ္တုရိုင်းများကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလူမီနီယံပရိုဖိုင်းဟုခေါ်နိုင်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသောသဘောအရစက်မှုအလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းသည်တပ်ဆင်ရန်အလူမီနီယမ်ပရိုဖိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလူမီနီယံချောင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ထားသောပရိုဖိုင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောပရိုဖိုင်းများကိုအလူမီနီယမ်ထုတ်ယူခြင်းပရိုဖိုင်း၊ စက်မှုအလူမီနီယမ်အလွိုင်းပရိုဖိုင်းဟုလည်းခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှုရှိပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းများစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အသုံးအများဆုံးအသုံးပြုမှုမှာအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းကိရိယာထိန်သိမ်းခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာအကာအကွယ်အဖုံးများ၊ ကြီးမားသောကော်လံအထောက်အကူများ၊ တပ်ဆင်ရေးလိုင်းဖြတ်စက်များ၊ မျက်နှာဖုံးစက်ဘောင်များ၊ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးလူမီနီယံပရိုဖိုင်းများကိုကျဉ်းမြောင်းသောသဘောဖြင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိဒါန်းအကျဉ်းကိုဖော်ပြထားသည်။
1. ပစ္စည်းကိရိယာလူမီနီယံဘောင်, လူမီနီယံဘောင်
2. တပ်ဆင်လိုင်း workbench အရိုးစု, ခါးပတ်ပေါ်ကိုလိုင်းထောက်ခံမှု, အလုပ်ရုံ workbench
3. အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲဘေးကင်းလုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး, ကြီးမားသောပစ္စည်းကိရိယာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖုံး, အလင်းမျက်နှာပြင်နှင့်ကို arc- proof screen ကို
5. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ bracket က
6. Photovoltaic mounting bracket က
7. ကား Simulator ကို bracket က
၈။ အမျိုးမျိုးသောစင်များ၊ ထိန်သိမ်းများ၊
9. အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပစ္စည်းလည်ပတ်ငွေကြေးလှည်း, လူမီနီယံပရိုဖိုင်းကို tool ကိုလှည်း
၁၀။ အကြီးစားပြပွဲခင်းကျင်းခြင်း၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသတင်းအချက်အလက်ပြဘုတ်များ၊
11. နေရောင်ခန်း, သန့်ရှင်းသောသွန်း
အထက်ဖော်ပြပါဘုံအသုံးပြုမှုအပြင်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုး၏မူဘောင်အတွင်းသို့လည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်အသုံးပြုလိုသောအခါတိုင်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာစက်မှုလူမီနီယံပရိုဖိုင်း၏သတ်မှတ်ချက်များစွာရှိသည်၊ သင်ရွေးချယ်သည့်အခါပစ္စည်းများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီရွေးချယ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်လုံခြုံပြီးတည်ငြိမ်ပြီးဖြုတ်တပ်ရန်လွယ်ကူသောအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။